Meteza Ho ilay Fanovàna Tianao Ho Hita Ato Amin’ny Global Voices – Midira Ho Isan’ny Filankevitry ny Vondrom-piarahamonina! · Global Voices teny Malagasy
Meteza Ho ilay Fanovàna Tianao Ho Hita Ato Amin'ny Global Voices – Midira Ho Isan'ny Filankevitry ny Vondrom-piarahamonina!
Join the Community Council and discuss the big questions facing GV.
Voadika ny 19 Aogositra 2018 14:32 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Esperanto , Español, English
Fihaonamben'ny Global Voices 2015 tao Cebu City, Filipina. Sary avy amin'i Jer Clarke CC BY-SA 2.0
Ry namana, mpiara-miasa ary fianakaviana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices,
Tonga eo amin'ny sampanan-dalana amin'ny maha fikambanana azy ny Global Voices. Taona vitsy lasa izay,niatrika onjam-piovàna lalina teo anivin'ny vondrom-piarahamonina nisy antsika isika, ny tontolo manodidina ary ireo teknolojia ampiasaintsika.
Raha toa nitombo sy niova ny vondrom-piarahamonina misy antsika, ka nikisaka avy amin'ny fitantarana rano lava tamin'ny sehatra fitorahana blaogy madinika nankany amin'ny tontolo haingam-pandeha sy maloto feno tabataba an'ireo tranokalan'ny tambajotra sosialy ny feo ety anaty aterineto, isika kosa niezaka nitàna ny toky nomentsika amin'ny fanamafisana ny tantara tsy voatatitra ary ny fanandratana ny feontsika mba hiarovana ny zon'olombelona ety anaty aterneto.
Fotoana izao hiheverana zavatra lehibe kokoa
Efa fanaontsika hatramin'izay ny manomana paikady amin'ny famantarana sy fiatrehana ny fiovan'ny teknolojia ary ny fomba fanao amin'ny fanehoankevitra anaty aterneto, kanefa mbola niatrika sedra maro hafa ihany koa isika tamin'ny fanantanterahana ny andraikitsika. Nametraka tanjona maro feno fahasahiana ho an'ny tenantsika ihany koa isika, nefa tsy mora ny fananganana ny rafitra sy ny tohana ilaina mba hahatrarana azy ireny.
Mba hahafahana mamatsy sy manohana ny lahasantsika izay heverina fa hanampy antsika hanatratra ny tanjontsika, ilaina ny mamerina mihevitra indray ny fomba iatrehantsika ny asantsika. Koa mba hahafahan'ny Global Voices hamita tanteraka antsakany sy andavany ny lahasany, mila fanohanana misimisy kokoa ara-drafitra sy ara-bola ireo toniandahatsoratra sy ny ekipantsika.
Te-hanohana ny fivoaran'ny Global Voices ho toy ny Fikambanambe iray ny mpikambana fototra sy ny ekipan'ny Global Voices mba hahafahany mivelona,miroborobo ary hanana fiantraikany bebe kokoa manerantany. Fantatray fa misy hery lehibe ho antsika ny fanoritana miaraka ny làlana hirosoana, kanefa amin'ny maha vondrom-piarahamonina antsika, dia lasa mivelatra sy feno fahasamihafana be isika ka tsy afaka ny hiankina amn'ny fifanakalozandresaka malalaka, tsy misy rafitra ho toy fomba ho entina mandray fanapahankevitra momba izay làlan-kombantsika.
Ny tena ilaina voalohany aloha dia ny hanangana vondron'olona eken'ny maro izay afaka ny hiady hevitra momba ireo fanontaniana saro-baliana ary hiresaka momba ireo olana iraisan'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo.
Fanolorana ilay Filankevitry ny Vondrom-piarahamonina
Anio no anoloranay ny fijoroan'ny Filankevitry ny Vondrom-piarahamonina iray, vondron'olona avy amin'ny vondrom-piarahamonina vondrona Global Voices izay hifanakalo hevitra sy hanapaka miaraka ireo fanontaniana fototra ezahantsika ho valiana mba hahafahana mandroso. Hatsanganay amin'ny faran'ny volana Aogositra io vondron'olona io, ary handinika ireo fanontaniana ireo manomboka ny volana Septambra ka haramin'ny tapaky ny volana Novambra.
Sary torohay nataon'i Eddie Avila, miaraka amin'ny sary fampahafantarana avy amin'ny The Noun Project.
Efa mba nosaininao matotra tsara ve hoe ahoana no fomba mety hanovàn'ny GV ny laharam-pahameham-panoratàny ? Na koa hoe ahoana no fomba hananganantsika lasitra vaovao ho fandraisana anjara ? Na koa handrafetana fomba vaovao fitadiavam-bola ? Raha izany, fotoana iray lehibe hahafahanao manome hevitra izao.
Saino ny mety hidiranao ao amin'io Filankevitra io, ary mivonòna ny hitondra ny hevitrao ho an'ilay vondrona mba ho dinihina. Raha maro ny hevitra ifampizarantsika, ho tsara be ny ho vokatr'izany
Fantaro ato ny zavatra rehetra mikasika ny dingana, traikefa ilaina sy ny tetiandron‘ilay Filankevitra.
Raha te-hiditra ianao, fenoy ilay taratasy fisoratana anaran'ny Filankevitry ny Vondrom-piarahanìmonina! IZAY REHETRA te-handray anjara dia tsy maintsy mameno io taratasy fisoratana anarana io avokoa.
Raha toa ianao ka mpikambana ao amin'ny Lingua, ary te-hanampy amin'ny fandikana ireo antotan-taratasy ho an'ny fizotran'ny fakànkevitra, mifandraisa amin'i Gohary.
Mandritry ny volana Aogositra, ho alefanay anaty blaogy avokoa ny hevitsika ho an'ilay Filankevitra, ahoana no fomba hanomezana endrika azy, ary inona ireo olana ho banjinina. Amin'io fotoana io ihany koa no hanararaotanay hananganana vondrona iray “Lingua folks” hanao fandikànteny ireo antotan-kevitra fanomezana torolalàna sy fanamoràna ny fanehoankevitra mikasika ireo olana ireo amin'ny fiteny isan-karazany.
Amin'ny volana Septambra no haorina ilay filankevitra – ka dia hanomboka ny tena asa!
Misaotra anareo hatrany ny amin'ny fanohanana, fihainona, fitiavana sy ny asa mafy ataonareo ato amin'ny Global Voices!
Am-pitiavana be #GVlove,.
Eddie, Ellery, Georgia, Gohary, Ivan, Jer ary Kat